အရှည်ဆုံးအချိန်များ၊အသင်းမှာညဦးညမ်းဂိမ်းများအတွက်နေရာရှာဖွေဖို့ဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းမြှုပ်နှံဖို့သူတို့အကြိုက်ဆုံးတီဗီစီးရီး–ဝမ်း၊ဘာမျှမတည်ရှိ! သောအခါဖွင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်သို့ကိစ္စရပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လက်နိုင်အောင်ပြသကြောင်းလူတိုင်းရချင်တယ်ဆိုရင်အလုပ်အကိုင်အစနစ်တကျပြုရ၊သင်ပိုကောင်းဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဒီအာကာသနှင့်သဘောပေါက်ပါပြီရှိပါတယ်အများကြီးတစ်ငရဲအပ်ပါတယ်ပြုသောအမှုခံရဖို့စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ဂိမ်းထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊သူတို့ကအမှန်တကယ်ရတဲ့အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအရပ်ပတ်လည်၌နေသော။, ငါတို့သည်မြော်လင့်ခြင်းအကြောင်း၏အဆုံးအားဖြင့်သင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားအစည်းအဝေးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေရာမှာယနေ့အချိန်တွင်၊သင်သွားကြောင်းင်အစစ်အမှန်သဘောတူအပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုအနည်းငယ်အရပ်နှင့်တကွသင်ပေးနိုင်။ အသံတူကြောင်းတစ်ခုခုအကျိုးစီးပွားသင်–သင်အကြောစားချင်သောအရှုပ်များချွတ်ရန်မြင့်မားတဲ့အပြန်အလှန်အတွေ့အကြုံများ–ဖတ်အောက်တွင်အသေးစိတ်! သင်သည်လည်းဆုံးဖြတ်အလာအပေါ်၌ဖြောင့်ကွယ်ပျောက်ခြင်းငှါညဦးညမ်းဂိမ်းများသင်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒါလုံးဝအဆင်ပြေလွန်း! လည်းပေါ်သင်၏လက်ကိုရယူခြင်းအချိုပွဲနှင့်အဘယ်အရာကိုမြင်သွားမယ့်အပေါ်ပထမဦးဆုံးလက်။
ငါလုပ်ချင်သင်အလွန်ရှင်းလင်းပြီးဒီနေရာမှာအမိန့်အတွက်ကစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝစာကြည့်တိုက်၏ခေါင်းစဉ်များ၊သင်ပေးချေဖို့မလိုအပ်မည်ဟုအမေရိကန်။ ကျွန်တော်သဘောပေါက်တော်တော်စောစောအပေါ်များရှိခဲ့ဖူးကြောင်းမြောက်မြားစွာလိမ်လည်မှုများအတွက်ဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်များစွာသောခေါင်းစဉ်ဖြန့်ချိရှည်လျားရှေ့တော်၌သူတို့အဆင်သင့်။ ဤသည်သာလံးမှကြွလာသောအခါအအရွယ်ရောက်ပြီးစီမံကိန်းကြောင့်၊ကုန်အံ့ရဲ့အမည်မှန်:အလွန်အနည်းငယ်လွှတ်ပေးပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ကြပြီဘယ်နေရာမှာမဆိုအနီးအဖြစ်ကောင်းဖြစ်သူတို့ပေးမည်ဟုကတိပြုခဲ့ကြသည်။, ကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးမှဒီမှာကမ်းလှမ်းမှုကိုအပေါ်ညဦးညမ်းဂိမ်းများသည်ထက်ဝေးပိုကောင်းဘာမှမတွေ့ပါလိမ့်မယ်တခြားနေရာနှင့်ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်မှု၏အကြောင်းအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖို့ဆန္ဒရှိနေတဲ့အဖြစ်ပေးသွားဖို့သင်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ ထုတ်ယူခြင်းကနေတဆင့်ဒီနည်းလမ်းကိုလည်းသေချာအောင်အားလုံး၏ပန်းတိုင်လူတိုင်းပါဝင်ပတ်သက်ကြသည်။ ဤအတွက်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်လျှင်ငါတို့သည်ဆုံးဖြတ်ရန်မရှိတော့ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းခြင်းနှင့်အရုံထိုင်ကြကုန်အံ့ရှိသိုးနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သော–သင်ကထားခဲ့ပါ့မယ်နှင့်ဘယ်တော့မှပြန်ကြည့်။, အခမဲ့သုံးစွဲခွင့်ကိုမော်ဒယ်ကိုထည့်လေ့မရှိထဲသို့ဘောလုံးကိုငါတို့တရားရုံးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအားပေး၏မက်လောက၌ကယ်နှုတ်ဖို့အရာတစ်ခုခုသင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်။ ဤသည်အဆက်မပြတ်စစ်တိုက်သည်ငါတို့အဘို့၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖေါ်ပြနိုင်အောင်တော်မူဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောအခါလိုအပ်သည်။ အခြားအရပ်သလား? ကောင်းစွာရုံသူတို့နေစေမယ့်သင်ချပြီးတော့အချို့!
အဆိုပါဂိမ်းမှာညဦးညမ်းဂိမ်းများနီးနှင့်အတူတယောက်အယူအဆအတွက်စိတ်အပျော်အပါးအစားစား။ တစ်ခုမှာအတိုင်းဤအမှုကိုပြုခဲ့ပြောဖို့အတွက်စာရင်းသွင်းဖို့စတင်ဂိမ်းနှင့်အတူပထမဦးဆုံး၊ထို့နောက်အပြာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လွတ်လာတ၏ဂိမ်းများရှိသည်မပါဘဲအပြာ၊အကယ်၍ဆန္ဒရှိကစားရန်အတွက်ဖြည့်စွက်၊အားလုံးအၡမ်ားတွေပဲအလုပ်အကြောင်းအများကြီးပိုကောင်း။ ငါထင်ကြောင်းပြောဖို့လုံခြုံညဦးညမ်းဂိမ်းများပြုတော်မူတော်တော်ကြယ်အလုပ်အတွက်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ရရှိဖို့စီမံပြပွဲလူတိုင်းသိသောအရာကိုမယ့်အဘယ်သို့မှကြွလာသောအခါအစွမ်းအလွန်ကြီးစွာသောအရည်အသွေး။, ဖြစ်ခြင်း၏ထိုယှဉ်ပြိုင်မှုမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုတာကအများကြီးသော်လည်း–ကျွန်တော်အဆက်မပြတ်ငါတို့ခြေချောင်းအပေါ်ကြောင်းဒါကြောင့်သင်ပေးနိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်နိုင်။ ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုရိုးသား၏ရည်ရွယ်ချက်ဤအရပ်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ချွတ် jerking ဘာသာရေးအစုဆောင်းမှု၏ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်း၊ကိုယ့်အကြောင်းပြောတာမဟုတ်ညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ! အများကြီးဖွင့်မှရရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှုထောင့်ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားနှင့်ကျွန်တော်တစ်ခုရှိသည်ဖို့တာပေါ့ပျော်စရာအချိန်ရှိခြင်းဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်များအတွက်။ ကြောင်းလျှင်သင်ဆဲစိတ်ဝင်စားတယ်၊ဟုတ်ပါတယ်!, အရာဖြစ်သင့်သောကြောင့်ရင်ဆိုင်လိုက်ရအောင်:အဘယ်သူမျှမပေးကမ်းညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာချင်ကြောင်းကိုသင်လို!
ကတည်းကညဦးညမ်းဂိမ်းများသည်ကစားရန်အခမဲ့တယ်ကျနော်တို့ရရှိပါသည်၊အချို့လူသတ်သမားရော်ညမ်းကပတ်ပတ်လည်အခြေညဦး၊ဒါဟာသဘောမျိုးတွေအများကြီးလာပေါ်အတွက်အခုအချိန်မှာမြင်င့်အဘယျသို့ပေါ်မှာအတြက္။။။။ ကၽြန္ေတာ္တိုသန်ရဲ့အနာဂတ်ဒီပွဲချင်းပြီးယုံကြည်ကြောင်းပိုပြီးပါဝင်ပတ်သက်ရသူလူများနှင့်အတူပေါ်တယ်၊ပိုကောင်း။ ထိုဒုက္ခ၏မနေ့ကနှင့်သောအရပ်တို့ကိုမသင်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာချင်သော–ရုံအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်တယ်ပြီးသမျှသောပစ္စည်းပစ္စယ၏နိုင်ချက်ချင်းမေ့လျော့!, နောက်ကွယ်မှအဖွဲ့ညဦးညမ်းဂိမ်းဒီနေရာမှာသေချာအောင်သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒညဦးပတ်ပတ်လည်အတွက်အလှန်ဆက်သွယ်ပတ်ဝန်းကျင်အမှတ်လျက်ရှိကြသည်။
ဂုဏ်အတစ်လျှောက်လာမယ့်နေ့–ငါတို့သည်မြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းသင်၏နောက်ဂိမ်း-လောင်စာ fapping အစည်းအဝေးအပူဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်!